JUNE&MAY: သားလေး အမှတ်တရ
Posted by JuneOne at 12:00 AM
happy birthday tar tar
လွတ်ငြိမ်းလေပြေ June 1, 2009 at 1:16 AM
Happy Birthday "thar thar"
ဖိုးစိန် June 1, 2009 at 4:11 AM
့HAPPY BIRTHDAY သားလေးအေးမင်းထွန်းရေ...
အကြီးအကဲ “မင်း” ကောင်း မင်းမြတ် တစ်ပါးကဲ့သို့တင့်တယ်ကျော်ဇော်ပါစေ
မပူမပင် မကြောက်မကြေ မတောင်းတပဲ
မိဘကိုလုပ်ကျွေးပြုစုနိုင်တဲ့ ကျမ်းမာသော ဥာဏ်ပညာကြီးသော စိတ်သဘောထားကြီးသော စေတနာသဒ္ဒါတရားထက်သန်သော ဘဝကိုပျော်ပျော်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေးဖြတ်သန်းသော သားကောင်းရတနာ ဖြစ်ပါစေဗျာ
ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲ ချစ်သောသူများဝန်းရံလျှက် လိုချင်သော ပန်းတိုင်းကို ခရီးတိုတိုနဲ့လျှောက်လှမ်းနိုင်သေားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေဗျာ
ponyate June 1, 2009 at 7:03 AM
ဘာလိုလိုနဲ့ သားတောင် တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီ။ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ကြည့်သွားပါတယ်။ အေးချမ်းသော ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
Andy Myint June 1, 2009 at 7:11 AM
June-1 က သွား ၁၁ ချောင်းတောင် ပေါက်နေပြီကိုး... သားကတော့ ၅ ချောင်း ၆ ချောင်းပဲ ပေါက်သေးတယ်။ Happy Birthday ပါဗျာ ။စင်္ကာပူက ဆရာဝန်တွေကို သံသယတောင် ဖြစ်တယ်။ ရေနည်းတယ် ရေနည်းတယ်ဆိုပြီး သူတို့ မွေးချင်တဲ့ အချိန်မှာ မွေးခိုင်းတာကို။ တိုက်ဆိုင်တာလည်း ဖြစ်မှာပါ။ ဒါမျိုးကြားရတာတော့ များပြီ။
nu-san June 1, 2009 at 8:04 AM
Happy Birthday ပါ သားသားရေ..
မနက်က နိုးတော့ ဒီနေ့ သားလေး မွေးနေ့ပဲ ဆိုတာ သတိရတယ်.. မွေးခါစအရွယ်ကတည်းကနေ အခုထိ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရတာ ကြည်နူးစရာ.. သားလေးက ဒေါင်းမျိုးလေး.. ကြီးလေ ချောလေ.. ကျော့ရေ.. မွေးနေ့မုန့်ကျွေးဦးနော်.. :D
Annpi June 1, 2009 at 9:49 AM
Happy Birthday သားသားလေး Edwin
ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး မိဘတွေအားကိုးရတဲ့ သားကောင်းရတနာ လေးဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
khaing June 1, 2009 at 1:27 PM
မီယာ June 1, 2009 at 1:57 PM
Happy birthday Edwin! May you haveahappy long life with your wonderful parents!
ZT June 1, 2009 at 4:28 PM
Happy Birthday June-1. :)
ခင်မင်းဇော် June 1, 2009 at 7:23 PM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေး ပေါ့ သားသားဂျွန်ဝမ်းရေ...
တနှစ်မှာ သွား ၁၁ ချောင်းဆိုတော့ သွားပေါက်မြန်တယ် ပြောရမယ်။
sin dan lar June 1, 2009 at 9:35 PM
khin oo may June 2, 2009 at 12:14 AM
Mae June 2, 2009 at 1:41 AM
သားလေး .. happy birthday!! Many happy returns! တီတီက အချိန်မတူတော့ နောက်တောင်နောက်ကျသွားပြီ
၁ဝ လက ဦးထုပ်လေးနဲ့ ပုံကို ချစ်လိုက်တာ၊ အရင်တင်တဲ့ ကွန်ပျူတာကို လက်ဝါးနဲ့ ရိုက်တဲ့ပုံလဲ သိပ်သဘောကျတာပဲ
မိုးကောင်းသူ June 2, 2009 at 11:32 AM
သားသားလေးရေ Happy Birthday!
TZA June 2, 2009 at 8:55 PM
JuneOne ကြီးလာရင် AirForceOne စီးရပါစေဗျား
khin oo may June 2, 2009 at 10:51 PM
MrDBA June 3, 2009 at 9:29 PM
၁ ရက်နေ့က သတိရတယ်။ မရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ အားနာထှာ။ သားသားလေး ကျမ်းမာချမ်းသာ ကြီးပွားတိုးတက်ပါစေ။ သားသားလေးကို မှီပြီး မိဘများလဲ ကြီးပွားချမ်းသာပါစေဗျား။
ကောင်းကင်ပြာ June 4, 2009 at 3:25 AM
သားလေးမွေးနေ့ လာတာ နောက်ကျတာ ခွင့်လွှတ်ပါ၊ Happy birthday ပါ သားသားရေ၊
JuneOne June 4, 2009 at 6:53 AM
ksanchaung June 4, 2009 at 8:54 PM
ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးတုန်းကလည်း ဆေးထိုးပြီး အဆင်မပြေတာနဲ့ နောက်ဆုံးခွဲမွေးလိုက်ရတယ်။ နှစ်ခါနာ ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ အခုနောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ မကြာခဏကြားရတယ်။
Rita June 7, 2009 at 9:15 PM
သားသားက လူချောပဲ။ နောင်နှစ်ပေါင်း အနည်းငယ်ကြာရင် သားသားမေမေတော့ မျက်နှာပွင့်ဦးတော့မယ်။
နွေးနေခြည် June 9, 2009 at 4:21 PM
စွပ်ကျယ်ကြီးခေါင်းစွပ်လို့ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ အိမ်တောင် ခေါ်ထားချင်တယ်း)
Rita June 12, 2009 at 10:42 PM
မေမေ့ Blog မှာ အသစ်မရှိပေမယ့် သားသားချောချောကို ခဏခဏ လာလာချောင်းရတယ်။ ချစ်စရာကောင်းလွန်းလို့။